အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း - လုဒိခြင်းဖြင့်အရသာကိတ်မုန့်ကိုလန်ဒန်သိမ်းပိုက်
Lidiya Todorova နှင့်အတူတစ်ဦးက "အရသာ" အင်တာဗျူး
ပုံရိပ်ကိုဖုံးလွှမ်းနေဖြင့် Irena White ကဓါတ်ပုံပညာ
ဒါကအင်တာဗျူးတဲ့ "အရသာ" အင်တာဗျူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိတ်မုန့်, ရေမြှုပ်, မုန့်, icing သကြားမုန့်ပြား toppers နှင့်ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်နဲ့တူ shaped ပင်ကိတ်မုန့်အကြောင်းပြောနေတာပါလိမ့်မည်။ ဤအမူထူးခြားတဲ့ကိတ်မုန်၏ထုတ်လုပ်သူသူမသည်ပြီးခဲ့သည့် 12 နှစ်ပေါင်းလန်ဒန်တှငျနထေိုငျခဲ့သညျ, Lidiya ခေါ်အတူတကွသူမ၏မိသားစုနှင့်အတူနေသည်။
Lidiya မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်းများမဂ္ဂဇင်း၏စာဖတ်သူများနှင့်သင်၏ပုံပြင်ဝေမျှဖို့အချိန်ကိုယူပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပိုမိုကိုပြောပြပါ "Lidiya ရဲ့ချိုမြိန်မီးဖိုချောင်"
"Lidiya ရဲ့ချိုမြိန်မီးဖိုချောင်" ငါသည်အကြာတွင်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့လှည့်သောငါ၏ဝါသနာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု, အားပေးသောအမည်ပါ။ ဒါဟာအားလုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါသာအခြေခံအိမ်လုပ်ကိတ်မုန့်နှင့်တစ်ဦးအနည်းငယ်တက်လုပ်ကိတ်မုန့်ဖုတ်ဖို့ဘယ်လိုသိသည်။ ငါ့အဖုတ်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်သိသာစိတ်အားထက်သန်သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဖြစ်လျှင်, ငါ့ကိုလူတို့အဘို့ဖုတ်စတင်သေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအပေါ်ရောင်းချနေစတင်ရန်စိတ်ကူးကိုပေး၏။ ငါအလေးအနက်ထားသူမ၏မယူခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်မကြာခင်မိတ်ဆွေများကသူတို့ကိုတစ်ကိတ်မုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြှနျုပျကိုမေးမြန်းဖို့စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်များပြီးနောက်, ငါ့မုန့်ဖုတ်ဝါသနာသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့လှည့်။ ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ငါရှေ့ဆက်ဦးတည်နေပါတယ်သောအရာကိုမသိခဲ့ပါ။
© Lidiya Todorova
သင်သည်သင်၏ client များအတွက်ဖြစ်စေကိတ်မုန်၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဘာတွေလဲ?
ကလေးမြားအတှကျအဆိုပါမွေးနေ့ကိတ်မုန့်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးမွေးနေ့ကိတ်မုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသဖြင့်အသည်းအသန်ဖြစ်၏။ အဆိုပါအမိန့်ကိုနေရာချသောမိခင်တွေလည်းဒါကြောင့်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ကလေးအတှကျကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြီးတွေကိတ်မုန့်ကသူတို့ကိုနှင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ကဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိတ်မုန့်လုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်ရန်လွယ်ကူခဲ့သလား အကြှနျုပျ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်လေးသေးငယ်သည်။ ငါယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှိရာအဆင့်မှာကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။ တိကျတဲ့ကိတ်မုန့် themes များ၏ဝယ်လိုအားငါ့ကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, စတာတွေကွဲပြားခြားနားသောခုတ်, လုပ်လေ၏ပုံစံမျိုးစုံဝယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါကိတ်မုန့် tools များအတွက်အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ခဲ့သည်ငါ့အမိန့်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအခုထိဖန်ဆင်းသောအကြီးမားဆုံးအသုံးစရိတ်ငါ့ဥယျာဉ်၏နောက်ကျော၌ငါ့ကိတ်မုန့်သွန်း၏အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါစသည်တို့ကိုငါ့အလိုရှိသမျှမုန့်ဖုတ်, အလှပြင်ဆင်ရေးပြုဘယ်မှာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပရိဘောဂမီးဖိုချောင်ရဲ့
© Irena White ကဓါတ်ပုံပညာ
မှာနောက်ထပ်ကြည့်ရန် Lidiya ရဲ့ချိုမြိန်မီးဖိုချောင်
ကိတ်မုန့်ချမှတ်ခြင်း၌သင်တို့၏နောက်ခံလား? အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ပါဘူး။ ငါပြုပြီးပြီကြောင်းတည်းသောကိတ်မုန့်အလှပြင်ဆင်ရေးအတန်းအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများဖြစ်ကြသည်။ ငါယခုဖြစ်ကြောင်းကိုရှိရာအဆင့်အထိရောက်လာပြီမှနာရီဗီဒီယိုများ, သုတေသနကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ကုန်ရပြီ။ သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်များသောအားဖြင့်တူသောအဘယ်အရာကိုအနံ့ခံသနည်း?
ထိုသို့အခိုက်မှာမီးဖိုတဖို၌အဘယျ၏အနံ့။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် vanilla, ချောကလက်ဖြစ်ပါတယ် ..
သငျသညျတခါတရံမီးဖိုချောင်ထဲမှာအမှားတွေလုပ်သလား? ဒါကတစ်ခါတစ်ရံတွေ့ကြုံတတ်၏။ သင့်ရဲ့ client ကိုထွက်ရှာသင်ကိုယ်တိုင်ကစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အဖို့မများအတွက်ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်။ ဤအမှုကိစ္စများတွင်ရှိသမျှတို့ကိုငါကျော်နောက်တဖန်စတင်ပါ။ ဒါကကျနော်နေဆဲလေ့လာသင်ယူသောအခါအစအဦး, ဖြစ်ပျက်လေ့ရှိတယ်။
သငျသညျနှစျဦးကျောင်းကကလေးတွေ၏တစ်ဦးမိခင်ဖြစ်ကြသည်။ အတော်များများကမိခင်တွေလည်းအိမ်မှာကနေနှငျ့သငျ့ကလေးများနှင့်မိသားစုဘဝတစ်ဝှမ်းဖြစ်ခြင်းတစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်, အလုပ်အကိုင်အသင့်ရဲ့ကြင်နာ၏အိပ်မက်မက်လိမ့်မယ်။ သင်၏အိပ်မက်အလုပ်လား? အိမျကနေအလုပ်လုပ်ကျိန်းသေအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 2-3 ငါ၏အမီးဖိုချောင်ထဲမှာဥယျာဉ်၏နောက်ကျောမှာဖြစ်ကြောင်းကိုမှီတိုင်အောင်ငါ့အမှု၌ငါသည်နေ့နှင့်တစ်ခါတစ်ရံညဉ့်အရှိဆုံးဖြုန်းနေကြတယ်။ ငါလေးတွေနှင့်အတူအများကြီးကူညီပေးသည်မူသောငါ့ခင်ပွန်းပေါ်မှာအများကြီးမှီခိုနေရသည်။ ကျွန်မအလုပ်နှင့်အတူနေအိမ်ဘဝဟန်ချက်ညီဖို့ကြိုးစားပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲပါတယ်။ သင်ဘယ်လိုနှစ်အနည်းငယ်အချိန်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်သနည်း
ယခုအချိန်တွင်ငါသည်ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်မပေးပါဘူး။ အချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်။ ငါ့အလေးတွေကပိုတက်ကြီးထွားနှင့်ပိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့ get ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ပို. ပင်အချိန်ရည်စူးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မိမိတို့၏ဝါသနာကိုဖွင့်ဖို့စဉ်းစားနေကြတဲ့သူတွေကိုရန်သင့်အကြံဉာဏ်ကိုကားအဘယ်သို့နည်း ရဲရင့်ဖြစ်ဖို့နဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ရန်။ client များအမြဲလက်ျာဘက်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုဦးတည်သင့်ရဲ့သဘောထားကိုအစဉ်အမြဲကြင်နာပြီးယဉ်ကျေးဖြစ်သင့်ကြောင်းသတိရရန်။ နှင့်အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးပေမယ့်မရ, သူတို့လိုချင်တာတွေအောင်မြင်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ရန်။
အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Facebook ပေါ်မှာ Lidiya Todorova
ကိတ်မုန့်, မုန့်, အိမ်လုပ်, icing သကြား, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, Julia jarvis, မီးဖိုခန်း, Lidiya ရဲ့ချိုမြိန်မီးဖိုချောင်, လန်ဒန်, လူ, အသေးစားစီးပွားရေး, ရေမြှုပ်, အရသာကောင်းသော | 06-12-2016 | rating:5/ 30